Famerenana bilaogy: Dave Woodson, Mpanolo-tsaina ny haino aman-jery sosialy | Martech Zone
Famerenana bilaogy: Dave Woodson, Mpanolo-tsaina amin'ny haino aman-jery sosialy
Talata, Septambra 14, 2010 Talata, Septambra 24, 2013 Douglas Karr
Dave Woodson dia consultant amin'ny haino aman-jery sosialy ary teknolojia manampy ny orinasa amin'ny fisian'izy ireo amin'ny Internet. Dave dia nanao famerenana tsara ny boky fitorahana bilaogy izahay no nanoratra sy nametraka azy teo amin'i Barnes sy Noble. Araka ny efa nampanantenaina, manao famerenana ny bilaoginy izahay mba hanomezana valiny mahasoa hanamboarana azy! Ity no mandeha:
Tsy tsikaritra avy hatrany hoe inona ilay tanjon'ny bilaoginao dia amin'ny mpitsidika vaovao. Tsy maintsy nandeha tany amin'ny About aho mba hahatsapana izay nolazainao tamin'ny bilaogy. Manoro hevitra anao aho ny hametraka byline na naoty eo amin'ny sisiny ankavanana izay manazava ny tanjon'ny bilaoginao.
Satria manampy ny orinasa amin'ny haino aman-jery sosialy sy ny haitao ianao, dia manome soso-kevitra lehibe aho miantso-to-hetsika (CTA) eo an-tampon'ny zana-kavo eo anilan'ny bilan-tsoranao isaky ny pejy ary ampahafantaro ny olona fa azonao karamaina ianao. Io CTA io dia tokony handefa olona iray a pejy fipetrahana izay samy manana endrika fifandraisana ary fampahalalana fanampiny momba ny mpanjifa sy serivisy omenao.
Manana lohapeo sy sary famantarana mahafinaritra ianao… raiso ny sary famantarana ary amboary kisary ho an'ny bilaoginao. Ity misy lahatsoratra eto ny fomba fanaovana favicon.
ny robots.txt Ny rakitra dia ao amin'ny fototry ny fonenanao ary manana ny sitemap.xml toerana voatanisa - mahafinaritra izany! Hanitsy ny fisie aho ary tsy hanaiky ny fivezivezena any amin'ny lahatahiry na rakitra ww- * - hampiato ny motera fikarohana tsy hanondro ny laha-tahiry fitantanan-draharahanao izany.
Hafahafa ny lalan'ny URL (permalink) anao - toa misy laharana post inline. Heveriko fa tsy maharary anao izany, saingy somary mampihoron-koditra. Satria tsy avo lenta ianao amin'ny valin'ny fikarohana (ampiasaiko Semrush hanamarina), mety esoriko io, toa somary spammy ilay izy. Afaka mampiasa fitsipika htaccess ianao hanovana permalink. Ny tiako indrindra dia /% Postname% /. Ny firafitry ny URL dia tsy nisy fiatraikany be tahaka ny taloha, fa iza no mahalala hoe rahoviana no hiverina io!
Mahatalanjona ny fametrahana ny bilaoginao - mazava sy mora hita ny zava-drehetra. Tiako ny bikan'ny Apture anao eo amboniny, tena mampihena ny fihoaram-pefy fanampiny ao amin'ilay pejy izany.
Maniry aho fa hisy tsara sary anao ao amin'ny lohateny. Mila fantatry ny olona hoe iza i Dave - ary ny sary mahafinaritra dia hanome izany fikitika manokana izany hampiorina ny fitokisana ary hahafantaran'ny olona tonga amin'ny bilaoginao. Manana ny sariko hatraiza hatraiza, na dia amin'ny ahy aza karatra fandraharahana. Rehefa misy maka ny karatro herinandro vitsivitsy taty aoriana dia ho tadidiny hoe iza aho. Tsy manao izany fotsiny aho satria mieritreritra hoe tsara tarehy aho;).
Voasoratra tsara miaraka amin'ny elanelam-potoana eo anelanelan'ny andalana sy ny fampiasana lisitra mahomby. Ny lisitra dia mandaitra tokoa rehefa manoratra satria ny olona dia afaka mamaky azy ireo mora foana. Manentana anao aho hampiakatra kely ny haben'ny endritsoratrao ary hampiasa teny saro-pantarina sy italiana amin'ny teny lakile tianao hodianao any an-trano miaraka amin'ny atiny.
Ny “Social Media & Tech” dia fehezanteny iray tena lehibe sy malalaka ary mifaninana amin'ny lohatenin'ny bilaoginao. Misy akany azonao tratrarina ve izay tery sy rambony lava kokoa? Amin'ny alàlan'ny fanentanana ireo teny fanalahidy lava rambo dia afaka mahazo fifamoivoizana mifandraika haingana ianao amin'ny fikarohana. Iray amin'izany teny izany mampiasa media sosialy ho an'ny orinasa. Tsy misy fikarohana 30 fotsiny isam-bolana, fa mpitsidika vaovao 30 eo amin'ny tranokalanao isam-bolana.
Mandeha misimisy ianao amin'ny fizarana rohy. Tena tsy nahita na iray aza tamin'ireny asa ireny aho na inona na inona ankoatry ny bokotra retweet an'ny Twitter (izay efa anananao) sy Bokotra toy ny Facebook.
Ny rohy mankany amin'ny fifandraisana pejy nalevina ao amin'ny menio fitetezana anao. Ny fampahalalana mifandraika toy ny nomeraon-telefaona, adiresy, na pejy fifandraisana mifandray miaraka amina form dia tokony ho mora hita ao amin'ny bilaogy rehetra. Tsy mandany fotoana hikarenjy manodidina ilay tranonkala ny olona… raha tsy mahita anao izy ireo dia lasa. Mamporisika ny orinasa sasany aho hametraka an'io fampahalalana io amin'ny lohateny sy tongotra tsirairay.
Ny fotoana lehibe indrindra hitako ho anao dia ny fampiasana ny bilaoginao amin'ny lohahevitra sy ara-jeografika hisarihana orinasa vaovao. Amin'ny fifantohana amin'ny faritra misy anao sy ny fijoroana ho mpanolo-tsaina ny media sosialy any, afaka manararaotra ny fikarohana ao amin'ny faritra ianao amin'ny orinasa mitady ny fanampianao. Na izany aza, tsy maintsy ataonao izay hahazoana antoka fa manana antso-sy-hetsika mahomby sy pejy fandraisana ianao mba hahafahan'izy ireo mifandray aminao mora foana!
Misaotra tamin'ny fotoana ahafahana mijery ny tranokalanao! Ary misaotra betsaka tamin'ny fandinihana ny bokinay!
Atsaharo ny fialofana amin'ireo mpitsidika anao
Fanadihadiana momba ny haino aman-jery sosialy Fizarana 2 - Fijery akaiky kokoa ao amin'ny Facebook
Sep 14, 2010 ao amin'ny 10: PM PM
Misaotra Doug, nomenao lisitra fanasan-damba tsara aho hiasa. Ity no bilaogiko voalohany nataoko ary tsy fialan-tsiny izany, fa io no andrana.
misaotra anao amin'ny hevitra marina
Sep 14, 2010 ao amin'ny 11: PM PM
Mahafinaritra ny mahazo torohevitra miasa toy izany. Fomba hametrahana ny tenanao any ivelany mba hitombo tsara kokoa amin'ny farany. Manantena aho fa afaka ny ho olon-dehibe sy hipetraka andro vitsivitsy.
Sep 15, 2010 amin'ny 1: 18 AM
Mahafinaritra anao ny manao an'io ho azy Doug satria fantatro fa tena mankasitraka izany izy. Manaiky amin'ny fo manontolo amin'ny zavatra lazainao aho ary manana "nitpicks" kely fotsiny ny tenako.
Ankehitriny dia tsy mihatra amin'ny tranokalan'i Dave izany satria ny sariny dia matetika tsy azy fa ho an'ny sasany. Ho an'ireo izay tsy tianao ny miteny amin'ny motera fikarohana mba tsy hiraharaha tanteraka ny fampirimana wp-nao satria ny fampidiran-tsary mihetsika dia miditra / wp-content / uploads / ary ho an'ireo tranonkala toa ny vadiko (mpanakanto izy, ary hasn ' t mihazona izany ka tsy hizara aho satria mankahala izy rehefa manao izany) mahazo fifamoivoizana be amin'ny fikarohana sary. Amin'ny lafiny hafa, tsy azonao antoka raha niova tamin'ny WP3 rehetra io na tamin'ny alàlan'ny multisite fotsiny fa toa tsy mampiasa wp-content intsony (ny hany fananganana WP3 ahy dia maro ka tsy 100%, na dia tsy hitovy aza ny fanavaozana. Avy eo raha toa ka tsy namboarin'izy ireo tamin'ny endriny vaovao ilay izy, dia mila manamarina ny tena izy ireo) fa raha ovaina dia mety tsy hiraharaha izany wp-
Manaraka, um, efa nahita an'i Dave ve ianao? Serieux, tadiavinao ao anaty lohateny ny sariny? Ary mieritreritra ianao fa azo atao ny maka zavatra tsara? Dave? Hehe, zanako ny Daver. 😉
Izaho manokana dia mankahala ireo bara tsy mitsahatra mipoitra amin'ny tranokala, fa amin'izay azoko dia vitsy an'isa aho. Ny zavatra iray ihany dia tena aleoko lavitra ny bara eto amin'ity bilaogy ity noho ilay an'ny an'i Dave. Eo amin'ny farany ambany dia tsy maharaka ary miseho foana izany. Isaky ny manana zavatra mipoitra avy any ambony aho izay mandrakotra ny atiny dia tsapako fa tena manao zavatra tsy mety izy io. Angamba raha teo foana ny bara dia ho tsara kokoa noho ianao manamboatra ny horonam-bokinao ho azy, fa eo amin'ny faran'ny pejy dia manana ny kely indrindra vintana hanelingelina azy io. Raha mikorisa hamaky lahatsoratra aho dia tsy tiako ny mipoitra bara manakana ny andalana totohondrin'ilay lahatsoratra amiko, na zavatra ratsy kokoa manarona ny atiny rehetra. Na dia tsy manana ny fonony rehetra aza izy ary mangataka ahy hisoratra anarana amin'ny boaty fandefasa-mailaka, ireo no ratsy indrindra. 🙂
Ny fetra 3000-nao dia mamono ahy 😉
Okay, teboka 2 hafa izay nifanakalo hevitra tamin'i Dave momba ny IM aho saingy mieritreritra aho fa hizara eto.
Voalohany dia iray fantatro fa mandeha amin'ny làlana roa ny olona. Aleoko tsy manana ny lahatsoratra feno eo amin'ny pejy eo aloha. Voalohany dia azonao ny pejy pejy fanampiny raha toa ka maninona izany aminao, fa mampahafantatra anao ihany koa izay zavatra hitan'ny olona iray fa nahavita zavatra bebe kokoa tamin'ny tsindry iray izy. Raha lahatsoratra iray manontolo ao dia afaka mamaky ny 1 sy ny 4 amin'ny 5 izy ireo nefa tsy fantatrao. Izy io koa dia manamora kokoa ny fahitan'ny olona iray lahatsoratra mahaliana azy ireo nefa tsy mila mandefa pejy hahatratra ny lahatsoratra manaraka (tsy dia lava loatra ny lahatsoratr'i Dave fa raha mety hiteraka fahasosorana izany ary tsy ahatongavan'ny olona ilay lahatsoratra tadiavin'izy ireo. ) Fa fantatro fa ny hafa mahatsapa ny mifanohitra amin'izany ary tena karazan'olona pref manokana 50/50 izany.
Faharoa dia ny fananana karazana lahatsoratra hifanaraka amin'izay voalaza ao amin'ilay horonan-tsary. Mandra-pamakiana an'i Google amin'ny horonantsary (ary liek dia tokony hatokisanao izany, wow my Google voice translate are HORRIBLE) ary mametraka ny valin'ny fikarohana dia mila manana ireo teboka vid ianao tena voatsoratra ao anaty lahatsoratra. Na dia tsara aza ny transcripts feno dia fantatro fa manaintaina izy ireo fa ny fahazoana ny lisitr'ireo teboka bala amin'ireo teboka lehibe dia mety hanampy. Ny lahatsoratra izay misy dia manampy fa mieritreritra aho fa ny tena zava-misy ao amin'ny vid dia afaka manampy koa.
Miala tsiny fa nanampy rambotra lava tao amin'ny 🙂 ianao ary zava-dehibe aminao indray noho ny nanaovanao izany ho azy.
Sep 15, 2010 amin'ny 8: 00 AM
Ny hany tokana notohizako dia ny fanaovana ny olona tsindrio ilay lahatsoratra, Richard. Ity fomba ity dia tena ho an'ny tranokala CPM (vola isak'arivony) izay tsy andoavan'ny mpanao dokam-barotra ny sarin'ny pejy. Fomba artifisialy fampitomboana ny fijerin'izy ireo izany ka mahazo vola bebe kokoa… amin'ny vola lanin'ny mpamaky.
Tsy mbola nahita porofo aho hatramin'izao fa ny paositra sasany dia mitarika fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny tranokala na mitarika fiovam-po. Mandra-pahatongako dia tsy hataoko izany. 😎
Sep 15, 2010 amin'ny 8: 02 AM
Bilaogy mahafinaritra izany, Dave! Aza mijery an'ity lisitra ity ho mpitsikera, tsy natao toy izany. Fanehoan-kevitra manorina rehetra izay tokony hanampy ny bilaoginao hitombo sy hahazoanao orinasa!
Sep 15, 2010 amin'ny 8: 55 AM
Tokony hanaiky anao aho amin'ny tsy fanananao fijery feno amin'ny pejy voalohany. Ny eritreritro dia:
1.) Tokony hanana ny lahatsoratranao malaza indrindra eo amin'ny pejinao eo alohan'ny fizarana fiasa. Ireto ny vola navoakanao izay niteraka fidiram-bola na resaka betsaka. Misy ny antony mahatonga azy io ho malaza indrindra aminao, angamba satria voasoratra tsara izy io ary mifandray tsara amin'ny ankamaroan'ny mpampiasa. Ka maninona raha manintona azy ireo eo amin'ny pejy voalohany na dia mety iray volana na roa aza izy ireo. Tsy tianao halevina ao anaty sakafonao izy ireo raha manome anao ny valiny tsara indrindra.
2.) Ny ambiny dia tokony ho sombiny farany indrindra amin'ny fahana. Ry olona, ​​midina amin'ny pejy voalohany ny IMO raha te hahalala hevitra ankapobeny momba ilay tranonkala. Manana 30 segondra ianao na angamba kely kokoa mba hitazomana ny sain'izy ireo. Ka ny ankihiben-tànanao sy ny sombiny amin'ny sakafonao dia antenaiko fa hisarika ny sain'ny mpamaky zavatra iray. Raha manana lahatsoratra feno ianao, izaho manokana raha tsy tiako ny lohahevitra fandefasanao voalohany dia mety tsy hitohy amin'ny tranokala aho. Saingy raha afaka mandinika ireo lohahevitra tato ho ato sy lahatsoratra amin'ny sombin-javatra aho dia afaka mahita bebe kokoa momba ilay tranonkala ary azo inoana fa hihalalina.
Iray amin'ireo lohahevitra karazana adihevitra lehibe io. Hitako fa ny ankamaroan'ny olona izay miantso ny tenany hoe "manam-pahaizana" na bilaogera "pro" dia aleony mijery sary amin'ny pejy eo aloha.
Saingy ho valin'ny doug: Tsy mbola nahita porofo aho hatramin'izao fa ny lahatsoratra feno dia mitarika fifamoivoizana bebe kokoa amin'ny tranokala na mitarika fiovam-po. Mandra-pahatongako dia tsy hanao izany aho. 😎
Sep 15, 2010 ao amin'ny 3: PM PM
Ekeko fa karazana olana CPM ho an'ny sasany. Ho ahy na dia heveriko fa manampy amin'ny famaritana izay tantara novakian'ilay mpitsidika raha oharina amin'ny tsy fahafantarana raha nikarakara tsara izy ireo na tsia na tsia. Tsy misy na inona na inona hampiova ahy manokana ary ny tiako ho fantatra fotsiny dia hoe tena nikarakara tsara an'io ilay olona mba handroso na tena raha tsy niraharaha ny hahazo bebe kokoa izy ireo.
Raha ny marina dia tokony hataoko JS "manitatra" karazana fananganana JS ka tonga eo amin'io pejy io izy ireo, jereo kely fotsiny ny manapa-kevitra raha te hahalala bebe kokoa, nefa avy eo mahazo lahatsoratra feno ihany ary mahazo angona tadiaviko Mety ho combo mora indrindra / tsara indrindra amin'izay tadiaviko izany.
Apr 11, 2011 ao amin'ny 2: PM PM
Lahatsoratra mahafinaritra! Tena mahaliana sy mampahalala vaovao.